Home Wararka Barakacayaal iyo Ciidanka Boliiska oo Bannaanbax loo soo saaray Waddooyinka Xamar.
Barakacayaal iyo Ciidanka Boliiska oo Bannaanbax loo soo saaray Waddooyinka Xamar.
Maaha ciidanka Boliiska joogtada ah ee Ciidankii Boliiska tababarka ugu xareysnaa Isbartiibada Muqdisho Statdium oo loo bixiyey 14ka Oktober ayaa waxay saaka Dawladda Farmajo ka soo saartay 1000 askari si faisan ugu fiirso Wasirka Iyo muuqaalkaba, kuwaas oo laga dhigay dad bannaan baxaya, hasa yeeshee ahaa ciidankii qaranka loo tababrayey.
Haddii bannaanbax dhacayo waa adag tahay inay u badan yihiin dhallinyaro ee waxaa inta badan aynu arki jirnay inay u bataan haween iyo caruur iyo dadka waayeelka ah, laakiin bannaanbaxa ka soo bilowday Zoope ilaa Madaxtooyada waxaa uu ahaa qaab dhoollatus ciidan balsa loo ekeysiiyey bannaan bax lagu taageerayo Farmajo. Ciidanka waxay u badnaayeen dhallinyaro la yiri “ Waa Amar ee soo labiso dharkaaga caadiga ah”
Dhinaca kale, gobolka Banadir ayaa Iyana waxay saaka Cooshashkii ay ku jireen xoog iyo qoorqabd uga soo saaray Barakacayaasha masaakiinta ah oo waxay cunaan haysan. Askar afka u duuban yahay ayaa horjoogayaasha ku amartay inay soo bixiyaan dhammaan dadka ku jira xerada uu horjogaha ka yahay iyadoo xero waliba la geeyey Sawirka Farmajo.
Iyadoo dadka ka tuugsadaa Magaalada Muqdisho loo qeybiyey lacag quraac ah iyo sawirka Farmajo waxaana hawlahaan xooggooda maalgelinaya guddoomiyaha Gobolka Banadir Eng.Yariisow oo xalay amar lagu siiyo inu isu keeno dad badan haddii kale uu maqan yahay oo lagu soo oogi doono dhaqaalihii uu lunsaday.
Bannaabaxaas khasabka ahaa waxaa ku suuxay ilaa 7 qof oo aan qaarkood xataa Meesha laga qaadin iyo qaarna ay qaadeen gaadiidka Ambulnceka oo geeyey Cisbitaallo. Dadka barakacayaasha ah waa daciif mana xamili karaa socod dheer waliba ul iyo askar garaaceysa la isugu daray.
Madaxweyne Farmajo iyo Cali Yare waa hawl ay aad u yaqaannaan waayo hadda ka hor markii Farmajo la riday ayaa waxaa barakacayaashaii dugsiga sare 15ka May iyo Beerta Daraawiishta loo qeybiyey min $5 oo la soo tubay Madaxtooyada horteeda, hasa yeeshee MW Sheekh Shariif iyo Guddoomiye shariif Xasan oo xirfadda fahmay ayaa shacbiga iyo Barlamankaba u sheegay khidada la rabay in la isticmaalo, tanna waa la mid oo hadda dadka ayaa fahamsan, barakacayaashuna waaba qirteed sida ku cad codka hoose.
Arrinkaan ayaa laftigiisa dembi ah oo laga rabaa inuu baralamanka wax ka qabto waayo shacab baahan ayaa waxaa loo isticmaalay inay lagu fushado dano gaar ah, iyadoo waliba la silic dilyeyenayo.
Previous articleXildhibaanada oo soo Bandhigay 37-deegaan oo Ciidamada DFS kasoo baxeen tan iyo markii Farmaajo la doortay!!
Next articleXildhibaan Khaliif ”Gudoomiye Mursal waa la xiray xildhibaanada waa loo diiday iney la kulmaan”
Itoobiya oo ku goodisay in ay ka jawaab celin doonto weerarkii...